ShweMinThar: How to take care your kids for Growup!
How to take care your kids for Growup!
အမှန်တကယ်ကြီးပြင်းလာအောင် ကလေးတွေကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မလဲ
“မည်သူ့ဘိန်းစားကမှ ဘိန်းစားဖြစ်ချင်လို့ ဘိန်းစားသည်မဟုတ်၊ စမ်းကြည့်ရင်းစွဲလို့ ဘိန်းစားဖြစ်တာချည့်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးများက ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့သာလိုပါသည်။ ကလေးမို့လို့ လူကြီးပြောသမျှယုံမယ်ထင်ရင် လူကြီးမှားပါသည်...”
ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှာ ကလေးဘ၀နေခဲ့စဉ်က မိမိကိုပျိုးထောင်ခံရပုံနဲ့ သူတပါးတွေပျိုးထောင်ခံခဲ့ရပုံ တွေကို ခုထိမှတ်မိနေပါသေးတယ်။ အမြင့်မတက်နဲ့၊ ပြုတ်ကျမယ်၊ ညနေဆိုအပြင်မထွက်နဲ့၊ သူရဲကိုက်လ်ိမ့်မယ်။ ကြောင်ကြီးလာပြီ၊ စလောင်းဖုံး၂ချပ်ကိုရိုက်ရင်ကျားကိုက်မယ်။ ညဘက်အိမ်ထဲမှာ ခြေသည်းလက်သည်း မညှပ်ကောင်းဘူး၊ ဟဲ့ဆော့လှချည့်လား..ငါရိုက်လိုက်ရ။ ဟိုကလေးကိုကြည့်စမ်း.. ငြိမ်နေတာပဲ.. ဘယ်လောက်လိမာလဲ.. နင်တို့ကတော့ တုတ်စာနဲ့မှငြိမ်မယ့်ဟာတွေ.. အစရှိသဖြင့်။ သည်လိုဆုံးမမှုမျိုးအောင်မြင်သလားဆိုတော့... ဟုတ်ကဲ့။ သရဲကိုမြင်ဖူးချင်လို့ သင်္ချိုင်းကုန်းကို မနက်စောစောသွားပြီး ချောင်းပါတယ်။ ဥစ္စာစောင့်ကိုမြင်ဖူးချင်လို့ ညနေစောင်းမှာ ပြာထုပ်တွေကိုင်ပြီး ခြောက်သည်လို့နာမည်ကြီးသောနေရာကို အစ်ကိုဝမ်းကွဲတွေနဲ့ အတူ သွားချောင်းပါသည်။ ကြောင်ကိုအလွန်ချစ်ပါသည်။ ဘုရားပေါ်ကို ကုတ်ကပ်တက်တာ ခေါင်းလောင်းမှောက်ထိ ရောက်ပါသည်။ ဘုရားရှေ့က ခြင်္သေ့ကြီးကို ဂုတ်ခွစီးပါသည်။ မလုပ်နဲ့ပြောလေ၊ လုပ်ချင်လေဆိုသည်မှာ ကလေးတိုင်းတို့ရဲ့ ဖြူစင်သောဗီဇစိတ်ပါ။ စူးစမ်းသောစိတ်သည် တော်လှန်သောစိတ်မဟုတ်ပါ။ ကလေးတိုင်း၊ လူငယ်တိုင်း စူးစမ်းလိုသောစိတ်ရှိကြပါသည်။ မည်သူ့ဘိန်းစားကမှ ဘိန်းစားဖြစ်ချင်လို့ ဘိန်းစားသည်မဟုတ်၊ စမ်းကြည့်ရင်းစွဲလို့ ဘိန်းစားဖြစ်တာချည့်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးများက ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့သာလိုပါသည်။ ကလေးမို့လို့ လူကြီးပြောသမျှယုံမယ်ထင်ရင် လူကြီးမှားပါသည်။ လူကြီးပြောတာ ဟုတ်လားမဟုတ်လားသိချင်လို့စူးစမ်းသောကလေး ပိုများပါသည်။
ကမ္ဘာ့အရှေ့ခြမ်းက အနောက်နိုင်ငံ (အရှေ့ခြမ်းမှာရှိပြီး အနောက်နိုင်ငံကစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီး အနောက် နိုင်ငံသားများတဲ့နိုင်ငံ ) တစ်ခုမှာတိုက်ခန်းအရောင်းပြခန်းတစ်ခုကို ရောက်သွားဖူးပါတယ်။ တိုက်ဝယ်ဖို့ လာကြသူတွေအများကြီးပေါ့။ ထူးခြားတာက မြန်မာနိုင်ငံလို လူကြီးတွေချည့်လာကြည့်ကြတာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ကလေးတွေရော၊ အဘိုးကြီးအဘွားကြီးတွေနဲ့ လက်တွန်းလှည်းသုံး ဒုက္ခိတတွေလည်းပါပါတယ်။ အဘိုးကြီးအဘွားကြီးများနဲ့ လက်တွန်းလှည်းသမားတွေပါ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး နေလို့ရမယ့်အိမ် ပုံစံ များကိုလည်း စနစ်တကျ သုတေသနလုပ်ပြီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်များကိုတွေ့ရပါတယ်။ လူတိုင်းကိုယ့် အား ကိုယ်ကိုးနေလို့ရမယ့်နည်းတွေကိုချည့် စိတ်ဝင်စားကြတာကို အားတက်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ နည်းနည်းစပ်စုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့မှ မထင်မှတ်တာကိုတွေ့မိပါတော့တယ်။
စောင်းငန်းစောင်းငန်းလေး လမ်းလျှောက်တတ်ကာစ ကလေးကိုအမေဖြစ်သူက တိုက်ရွေးခိုင်းနေတာပါ။ ကလေးကိုတိုက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ခိုင်းတယ်၊ လျှောက်ကိုင်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ ကလေးက တိုက်နံရံက ဇောင်းကလေးတစ်ခုကိုပွတ်သပ်လိုက်ပြီး အမေကိုကြည့်နေတော့ အမေက အင်း.. တော်လိုက်တဲ့သား.. နောက်တိုက်တလုံး သွားကြည့်ကြစို့လို့ ပြောပြီး ကလေးကိုလက်ဆွဲပြီး ထွက်သွားတော့တာပါပဲ... ပြောချင်တာက အနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့သားသမီးကို ၁၈နှစ်ပြည့်ရင် အိမ်ကထွက်သွားခိုင်း တယ် ဆိုတာ ထွက်သွားခိုင်းနိုင်လောက်တဲ့ အသိပညာနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားစိတ်တွေကို သည်လိုအရွယ်လေးကတည်းက မွေးထည့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပြီး လူကြီးဖြစ်စအရွယ်မှာ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးတတ်အောင် တမင်အိမ်ကထွက်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်လို့ပါပဲ။ အခုလိုတစ်နှစ်သားလေးကို တိုက် တစ်လုံးကို လိုက်ကြည့်ခိုင်းသလို ကလေးကလည်း သူလမ်းလျှောက်ရင်း လဲကျလို့ ဆောင့်မိနိုင်တဲ့ နေရာလေးကိုပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလွန်းလို့ သူတို့နောက်ကလိုက်ကြည့်တော့ နံရံ အနားစောင်း တွေကို ချွန်မနေစေဘဲဇောင်းလုံးထားတဲ့၊ လှေကားကိုလည်း ကလေးအတွက်အဆင်ပြေအောင် တပ် ဆင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးအိမ်တလုံးကို သူတို့ဝယ်လိုက်ကြပါတယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ တစ်နှစ်သား ကလေးကို အိမ်တစ်လုံးရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်အရွယ်သားသမီးက အိမ်တလုံးကိုစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ခွင့်ရကြပါသလဲ။ ကိုယ့်အ၀တ်အစားကိုတောင် ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်ဝယ်ဝတ်ခွင့် ရကြသလား။ အမေအဖေခိုင်းသမျှလုပ်ပြီး ထားတဲ့အတိုင်းနေတဲ့ကလေးကို လူလိမ်မာလို့ ထင်ကြချီးမွမ်းခန်းဖွင့်နေကြချိန်မှာ သည်ကလေးဘယ်လောက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အညွန့်ကျိုးနေမလဲဆိုတာ သိကြရဲ့လား။ ကိုယ့်မသိစိတ်ထဲမှာ အာဏာရှင်စိတ်ဝင်နေပြီး သူများရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်တွေကို ပိတ်ပင်နေမိပါပကောဆိုတာကို ကိုယ့်သားသမီးကိုယ်ချစ်လို့ အစစအရာရာ စီစဉ်ပေးနေတာပါဆိုတဲ့ ဆင်ခြေလေးနဲ့ ကာတတ်ကြပါတယ်။ သားသမီးကိုချစ်ရာရောက်ရဲ့လား၊ စိတ်ရောလူပါ ကြီးပြင်းခွင့်ပေးရာရောက်ရဲ့လား လို့ မိဘများတွေးမိကြပါသလား။ ကလေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရွေးချယ်ချင်စိတ် ပျင်းသွားရင်း၊ မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက်တာဝန်ယူရကောင်းမှန်းသိတဲ့စိတ် ပျင်းသွားရင်း တဖြည်းဖြည်းအသက်တွေကြီးလာတဲ့ ကြီးပျင်းသူများကို မွေးထုတ်သင့်သလား။ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကို ပြုလုပ်ရင်း မိမိရဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိစ္စအရာရာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရင်ဆိုင်တတ်၊ ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ တာဝန်ယူလိုစိတ်၊ တာဝန်ယူလိုမှုတို့နဲ့အတူ ကြီးလာတဲ့ ကြီးပြင်းသူမျိုးကို မွေးထုတ်သင့်သလား။ မင်းတို့ဘာသိလို့လဲ၊ ကလေးတွေ ကလေးနေရာနေစမ်း၊ လူကြီးတွေကြားဝင်မရှုပ်ချင်စမ်းပါနဲ့၊ စတဲ့ စတဲ့စကားတွေကြားမှာ လူငယ်တွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ် ပျောက်ဆုံးပျက်သုဉ်း ခဲ့ကြရပါ တယ်။ ရွေးချယ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ကြရာက အကောင်းအဆိုးကို ရွေးချယ်တတ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ရဲခြင်းဆိုတဲ့ လူရည်လူသွေးများပါ ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ၀မ်းပန်းတနည်းပြောဖူး ပါတယ်။
သူ့ရဲ့အဘွားအသက်၇၀ကျော်ပျောက်လို့သူကအိမ်ထဲမှာလိုက်ရှာပါသတဲ့။ နောက်အဘွားရဲ့အမေ အသက်၉၀ကျော်အဘေးရဲ့အခန်းထဲမှာ နွေနေ့လည်ကြီးခြင်ထောင်ချလို့ ခြင်ထောင်လှုပ်နေလို့ မြစ်ဖြစ်သူကသွားချောင်းပါတယ်တဲ့။ သည်တော့မှ အဘေးဖြစ်သူကအဘွားကို သူ့စကားနားမထောင်ဘဲ (သူ့ရဲ့အတည်ပြုချက်ကိုမတောင်းဘဲ) သူ့မြေးမြစ်တွေကို သင်တန်းတက်ခိုင်းလို့ ခြင်ထောင်ထဲခေါ်ပြီး ပေါင်တွင်းကြောဆွဲလိမ်ကာ အပြစ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသတဲ့။ သည်တော့မှ သူငယ်ချင်းလဲ သူ့အခြေအနေက ဥထဲမှာပဲရှိသေးပါလား၊ အကောင်တောင်မဖြစ်သေးတဲ့ အခြေအနေလောက်ပဲ ရှိပါလားလို့ စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့တာအသံတောင်မထွက်ရဲခဲ့ပါဘူးတဲ့။ လက်ရှိမြန်မာပြည်က အဖြစ်မှန် အခြေအနေတစ်ရပ်ပါ။ မြန်မာလူငယ်တိုင်း သည်လိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကြုံခဲ့တယ်လို့မဆိုလိုပါ။ လူတစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်စီဖြစ်ပေမယ့် အများစုအနေနဲ့ ကိုယ့်ဖြစ်ရပ်နဲ့ကိုယ် ပြန်လည်နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားမိစေဖို့သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တိုင်းတပါးမှာ ပွေလီတဲ့ကလေး မျက်နှာကောင်းရပါတယ်။ creative mind ရှိတယ်ဆိုပြီး မြေတောင်မြှောက်ခံရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ "ဟဲ့မျောက်လောင်းလေး.. ပွေလီပါ့တော်.. အငြိမ်ကိုမနေနိုင်ဘူး.. သည်နေ့ဈေးကပြန်လာမှ ထားဝယ်ကြိမ်နဲ့တွေ့မယ်"လို့ ချီးမြှောက်တတ်ကြ ပါတယ်။
သည်တော့ သူများနိုင်ငံက အသက်၁၈နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်က လူကြီးတစ်ယောက်လို ရွေးချယ် တတ်၊ ရွေးချယ်ရဲနေပြီး အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရင်း တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန်မှာ မြန်မာပြည်ထဲက အသက် ၂၅နှစ်ကျော်တဲ့ သူငယ်ချင်းလိုလူတွေက အဘေးထံမှာ အမိန့်တောင်းရင်း ခွင့်ပြုချက်ယူနေရမှတော့ သက်တူရွယ်တူချင်း ဘယ်လိုလူရည်လူသွေးချင်းပြိုင်နိုင်ကြပါ့မလား။ သူငယ်ချင်းကို နှိမ်တာမဟုတ်သလို မြန်မာပြည်ထဲက လူငယ်တွေကို နှိမ်တာလဲမဟုတ်ရပါ။ ကိုယ့်မြန်မာလူငယ်တွေကို နိုင်ငံတကာက ရွယ်တူလူငယ်တွေထက် ပိုမိုထက်မြက်တော်တတ်နေစေ ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ သူတို့တွေနှိုင်းယှဉ်တတ်လာအောင်၊ ကြိုးစားတတ်လာအောင် မြင်ဖူးတာလေးကို ပြန်ဝေမျှခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ရေးဖြစ်တာလဲ ပါတာပေါ့လေ။ အိပ်မက်ပရိသတ်နဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတကာက လူငယ်တွေထက် ဉာဏ်ရည်လူရည် ခေါင်းတစ်လုံးသာသူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
Ainmat.com မှ စာရေးသူ ခွန်မြလှိုင်ရဲ့ အက်ဆေးကိုသဘောကျလို့ကူးပြီးကျွန်တော့် ဘလောခ့်မှာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့အမြင်ကိုအပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောပါရစေ။
Posted by Alex Aung at 2:27 PM
For kids future!